Lecturer ( Business ) | Myanmar Noble College ﻿
• ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ကျောင်းဝင်ခွင်အတွက်ပြုလုပ်ရသော အစီအစဉ်များ (Explaining, Writing Test, OralTest)တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
• MBA,M.Com ,MBF , MPA ,PhD degree holders -preferred.
• Have at least3years of successful teaching experience in education institutions.
• Have strong organizational and problem solving skills, and ability to work under pressure
• Ability to successfully operate asalecture for over 16 years students.
• Ability to work withateam in Business Department's Administration
• Lecturerရာထူးအတွက် MBA, M.Com,MBF, MPA, and PhD ဒီဂရီများလျှောက်ထားနိုင်သည်။
• သင့်တော်သောသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်အထက်ရှိရမည်။
• နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဘွဲ့လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်၊ သင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိသူများဦးစားပေးမည်။
Company Industry: Lecturer ( Business )
Lecturer ( Business ) Education,Childcare & Teaching Jobs jobless jobsinyangon Myanmar Noble College Education, Childcare & Teaching jobs Education, Childcare & Teaching jobs Lecturer ( Business ) Jobs in Myanmar, jobs in Yangon